Imaginbank sy Marca dia mandray ny fanavaozana lehibe indrindra ao anatin'ny fotoana maharitra | Vaovao IPhone
Imaginbank sy Marca dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra ao anatin'ny fotoana maharitra
Imaginbank no biraonao amin'ny findainao, hatramin'ny ahafahanao manatanteraka asa banky rehetra avy amin'ny fampiharana azy na amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny rafitra fandefasan-kafatra eo no ho eo. Raha fintinina, amin'ny maha fampiharana azy io dia mila fanavaozana tsy tapaka sy fanatsarana vaovao, noho izany, maneho hevitra izahay inona ny vaovao atolotry ny Imaginbank amin'ity fanavaozana farany natomboka tao amin'ny iOS App Store ity.
Amin'ny lafiny iray, Brand dia nanova tanteraka ny famolavolana ny fampiharana, mahatonga azy io ho intuitive sy tsotra kokoa, mampihena ny fiasa ary manatsara ny fomba fitetezana azy io. Ireo no vaovao rehetra.
Miaraka amin'ny Imaginbank isika dia miatrika ny banky finday tena izy izay azontsika jerena ao amin'ny iOS App Store. Midika izany fa ny Imaginbank dia biraon'ny findainao, araka izay azonao atao amin'ny fanatanterahana ny asan'ny banky amin'ny fampiharana azy na amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny rafitra fandefasan-kafatra eo no ho eo.
• Afaka mamorona fanamby ianao izao ary mitahiry tsikelikely hahatratra ny nofinao.
• Haingana noho ny teo aloha ny fampiharana. Hihatsara hatrany izahay 🙂
• Azonao atao ny manova ny tenimiafinao isa ho an'ny alphanumeric
• Mora kokoa ny mametraka kaonty / IBAN rehefa manao famindrana (azonao atao ny mandika sy mametaka azy)
• Ary fanatsarana bebe kokoa ny fampisehoana
Manova tanteraka ny endriny i Brand ary mitondra vaovao ho antsika
BRANDY - Diary ara-panatanjahantenamaimaim-poana
Ny fampiharana Marca dia tsy mbola nampiavaka ny fahombiazana sy ny fampiasana azy. Na izany aza, nisafidy ny hahazo ny volavolan'i El Mundo izy ireo tamin'ny farany, gazety iray hafa ao amin'io vondrona io ihany, ka nahatratra ny fitetezana interface tsara tsotra sy mora kokoa. Na dia ambonin'izany rehetra izany aza, ny zavatra tena ilaina dia manana adaptation ho an'ny iPad izy izao. Ireto ny vaovao:
- SISTEMA NAVIGATION Vaovao: Mora kokoa izao ny mahita ny vaovao rehetra amin'ny fanatanjahantena rehetra atolotry anao an'i MARCA.
- MINITRA farany: fidirana amin'ny indray mipy maso ny vaovao farany noforonina tao MARCA, isa-minitra n'ny fanatanjahantena.
- AGENDA TV Vaovao: Miaraka amin'ny fandaharana fanatanjahan-tena rehetra amin'ny fahita lavitra isan-kerinandro.
- fampahatsiahivana Namboarina: fidio ny ekipa tianao, ny fifaninanana na ny fanatanjahantena mba handraisanao ny tanjona, ny valiny ary ny vaovao.
- VAKIO AORA: Safidio ny vaovao izay tsy azonao vakina amin'izao fotoana izao mba hovakinao any aoriana, eny fa na dia ivelan'ny Internet aza.
- Azo ampiasaina koa izao iPad.
- Fanatsarana ny fitoniana sy ny fiasan'ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Imaginbank sy Marca dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra ao anatin'ny fotoana maharitra
Jony Ive dia kintana tamin'ny horonantsary farany momba ny boky "Namboarin'i Apple any California"
Ny fampiharana 1Password dia havaozina mba ho lasa zanatany amin'ny Apple Watch